Adobe, Twitter ary haino aman-jery mahazatra no hiady amin'ny lalina? : Martin Vrijland
Adobe, Twitter ary haino aman-jery mahazatra no hiady amin'ny lalina?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 6 Novambra 2019	• 0 Comments
In ny boky vaovao nataoko Nohazavaiko ny fomba azo ampiharina amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao amin'ny haino aman-jery, saingy eo amin'ny sehatry ny haino aman-jery sosialy sy fifanakalozan-kevitra ihany koa, ary manazava ny fomba niasan'ny fampahalalam-baovao ny teknika rehetra hametrahana ny vaovaom-baovao nandritra ny ampolo taona. Izany dia esen'ny maro ho toy ny mpiray tsikombakomba, araka ny hevitr'i fa tokony hisy foana eo anivon'izy ireo izay hiteny ny feon'ny fieritreretany, tsy miraharaha ny fahatongavan-tsofina amin'ny fahalalana. Raha mahazo ny vaovao avy amin'ny loharanom-baovao 1 ny orinasam-baovao sy ny gazety ary ny loharanom-baovao iray dia ohatra, ny General Dutch Press Office of John de Mol, dia ekipa kely ao anatin'io ANP io ihany no tokony hahafantatra momba izany. Ary ao anatin'io ekipa io ihany koa, ny fahalalana manasaraka dia afaka miantoka fa olom-bitsy ihany no mila mahafantatra momba ny fitaka sy ny fitaka.
Matetika sy talanjona aho matetika amin'ny fahatokisana amin'ny haino aman-jery, izay anisan'ireo lazaina fa nifoha. Raha mbola nanaitra na "nanaitra" ny fihetseham-ponao voalohany momba ny vaovao, dia tsy mbola tsapanao akory ny fomba naneren'ny olona mankany amin'ny lalàna vaovao henjana miaraka amin'ny hetsika ara-tsaina. Tsy sahy miresaka momba ny 'fahalalàna' ny olona ary mino tsara fa indraindray ny hetsika faneva sandoka no nisy, saingy izany dia lavitra ary azo antoka fa tsy misy izany any Holandy, satria azo atokisana ny Holandey ary isika rehetra dia nanome ny olona nahasoa azy. ny haino aman-jery sy ny politika ary ireo mpanao politika mitsikera any The Hague. Ny olona toa an'i Jeroen Pauw sy Matthijs van Nieuwkerk dia mbola eo am-pelatanana ary mbola tsy hitanay akory fa mpitantana fahatsiarovan-tena matanjaka izay manana fifanakalozan-kevitra hamoronana ny fisehon'ny tsikera ary hampihena ny mety hiseho ny halalin'ny fitaka. . Mbola tsy mino izahay fa azo fehezina ny fanoherana.
Raha, amin'ny hetsika ara-tsaina iray izay heverin'ny rehetra ho vaovao sandoka, ianao dia miady hevitra matotra, miaraka amin'ireo manampahaizana matotra ary manana fihetseham-po maro, dia hino izany avy hatrany ny rehetra. Ary raha mamerina izany vaovao izany any amin'ny onjam-peo rehetra, amin'ny gazety rehetra sy ny vaovao rehetra dia resy lahatra ny rehetra. Io herin'ny faharesen-dahatra io dia nohamafisin'ireo filazalazana mitsikera ireo media hafa ireo, izay mangina miaraka amina hetsika ara-tsaina. Mihazona ny sain'ireo antsoina hoe fifohazana izy ireo saingy mifantoka amin'ny zavatra toy ny 911, JFK, ny fidinan'ny volana ary ireo karazana vaovao taloha na 'fahatsiarovan-tena'; noho izany dia mitazona ireo tena mifoha ao anatin'ny fanao mampihomehy momba ny lalao (saika isan'andro) miaraka amin'ny vaovao sandoka novokisana mba hanatanterahana ny lohahevitra politika. Na ny haino aman-jery sy ny haino aman-jery hafa dia eo am-pitandremana ny vahoaka tsy hahalala ny fomba 'Wag the Dog' (sarimihetsika avy amin'ny 1997) amin'ny haino aman-jery sy ny sarimihetsika Truman Show (sarimihetsika avy amin'ny 1998) izay tantanan'ny olona. "Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny mpanohitra dia ny fitarihana azy io"
Adobe, orinasa izay mamorona rindrambaiko mamolavola izay, ohatra, dia azo ovaina, ny sarimihetsika. nanambara ny andro talohan'ny omaly hiara-hiasa amin'ny Twitter sy ny New York Times. Tian'izy ireo ny hametraka fenitra ny fahamarinan'ny votoaty. Ao amin'ny bokiko dia efa nanambara aho fa ho avy izany ary mety ho toy ny fandraisana andraikitra mahafinaritra izany, izay angamba midika fa ny "orinasa vaovao sandoka Rosiana" dia tsy afaka manao horonantsary sandoka hanampiana an'i Donald Trump handresy amin'ny fifidianana manaraka, fa Na iza na iza mitazona ny lakile amin'ity fitsipi-panamarinana ity, raha ny marina, dia milaza fa ny horonan-tsary tsirairay avy amin'ny "loharanom-pahalalana" dia marina ary izay rehetra manelingelina azy hilaza fa vaovao sandoka izany. Raha ny marina; mety hahita ny filma sandoka ilaina amin'ny vanim-potoana ho avy isika mba hisarihana bebe kokoa ilay olana. Azontsika atao ny mampitaha izany amin'ireo tranokala vaovao sandoka izay niniana natao, izay natao hilazana hoe:jereo tranonkala vaovao sandoka misy, noho izany dia mila mametraka karazana 'ministeran'ny fahamarinana' Facebook sy ny sivana media sosialy izahay". Ity fenitra fahamarinana vaovao ity dia tsy mihoatra ny tokony ho izy: ny minisitra George Orwell 1984 fanamarinana ny fahamarinana.
Ankehitriny dia tsy isalasalana fa ho an'ireo manam-pahaizana manokana nasaina ao amin'ny latabatr'i Jeroen Pauw mba hanazavana ny maha-tsara sy ilaina ny marika hatsarana toy izany, fa raha ny masoivohom-baovao lehibe dia mahazo ny kaody mihomehy mba hankatoavany ireo vaovao sandoka rehetra. tsy izay azonao avy amin'izany vahaolana izany ary raha ny marina dia manamafy fotsiny ny ampanjaka ny famokarana vaovao sandoka.
Lisitry ny rohy loharano: engadget.com
Ny famonoana indroa an'i Gina sy Marinus ao amin'ny sinema Pathé Groningen
Tags: Adobe, fenitra fahamarinana, afa-po, deepfakes, Featured, haino aman-jery, vaovao diso, vaovao, fotoana, Twitter, York
« Boky vaovao Martin Vrijland 'Ny zava-misy araka ny fahitanay azy dia efa vonona ho amin'ny fandefasana!
Philippe Schol, mpisolovava, dia nitifitra ny tatitra momba ny fanonganana an'i Schiphol »
Total visits: 13.788.505
Fakafakao op "Tsy mino ny New World Order" i Robert Jensen: manaporofo fa mpanohitra i Jensen.nl